Saamile, iyo agaasimahii bariga Afrika ee Shirkadda Soma Oil and Gas, oo hadda magaceedii wasaqeysnaa ku beddeshay, Coastline Exploration Limited, shaqsi la soo shaqeeyay Norwegian Refugee Council, isla-markaana UN Monitoring Group, hore ugu eedeysay in ay ku tuhmayaan in uu xiriir la leeyhay Kooxda Al-Shabaab.
Musharrax Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmajo khudbadiisa waxey aheyd mid ka reebeysa (disqualifying speech) tartanka xilka Madaxweyna, waa Qormadda todobaadka ee Dr. Maxamud M. Culusow.
Qeybta Koowaad halkaan ka akhriso | Sanadkii 1945kii gobolada waqooyi waxaa ka hanna qaadey Xisbi siyaasi ah,oo ay dadku markii hore mucaaradeen una qaateen inuu ku saleysanyahay hab qabiil hase yeeshee ka dib ayay dadkii fahmeen isla sanadkii 1956dii waxaa la badelay magacii Xisbiga iyo ujeedooyinkiisiiba.
Lix Tilaabooyin oo aad ku maarayn kartit Waqtigaaga
Gaboodfalka lagu sameyay Jeneral Indhaqarshe
Waajibka dowladda federaalka, Golaha Wadatashiga Qaranka iyo Guddiyada doorashada wuxuu ahaa inay caddeeyaan kuraasta haweenka u tartamayaan inta aan la bilaabin doorashada si aan dhibaatooyin looga dhex abuurin bulshada Soomaaliyeed. Nasiib darro, ma dhicin arrintaas.
Todobaadkii tagey, indhaha waxay kusoo jeedeen Beledweyne, oo la hadal-hayay doorashadda kursiga Fahad Yaasiin, oo kasoo baxay daaha-gadaashiisa uu ku dhuumanayay shan sano, warar dheeraad ah, kala soco Warbixinta Dhacdooyinka Todobaadka ee Keydmedia Online.
Sawirka markhaatiga u ah dhexdhexaadin Madaxweyne Axmed Cabdi Karie Qorqor ka dhex bilaabay Xildhibannada kala ah Cabdiraxman Cabdishakur, Saadaq Cumar Xassan, iyo Cabdullahi Aadan Kulane oo matalaya dadka, deegaanka, iyo DG Galmudug wuxuu ka tarjumaya dadaalka samataliska ah ee Madaxweynaha DG Galmudug Axmed Qorqor.